Rastafarian Zimbabwean: Some of the Text Messages I got on my phone today
Some of the Text Messages I got on my phone today
01 April 08 News Headlines: "The leader of the Main opposition Robert Mugabe has started preparing for the 2013 elections & has vowed to fight back into power "
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - -
Grace to Bob..."Baba vemwana moto mama necampaigne 'cause ini handisikuzobuda muStatehouse, anenge ahwina ndiye wandinogara naye'
Don't talk to me anymore or even tell your friends that you know me.
Wandinyadzisa wena shamwari, kurota here wavhotera Zanu PF!
Do u know munhu ane pick up? Ndawana mhene iri kuda kutamiswa anobhadhara neUS plus anodira juice, ari kutama wkend 29 march from State HOUSe to ZVIMBA.
Musi wa29 munhu nemunhu panzvimbo yake.Mugabe kumunda, Simba kufinance, Morgan kuState house. Vote wisely. Pas this sms 2 as many ppl as psbl.
Headlines after elections
1. Makoni admits he was sent by Mugabe
2. Perence Shiri commits suicide
3. Chihuri escapes to South Africa
Chinotimba we kuporisha shangu kuMozambique
5. Joceline Chiwengwa rave hure remakoko
6. First lady Mai Tsvangirai visits displaced murambatsvina victims
Tatoveko na mai Tsvangirayi ku State House. Tirikutsvaira tsvaira nekugeza ma window. Grace ndiye ave sisi mutsva webasa becoz aramba kuenda namudhara
Make sure kuti mudhara asiya maKeys ekuState House asati aenda next week.Kana achinyara anosiya parobot cnr.7th & S. Machel on his way to the airport.
Grace anokumbirwa kuti anyatsotsvaira zvinoitawo vanhu kana vachishifta. Cobra nemutsvairo anosiya aisa kuseri kwedoor vasati vaenda kwazvimba.
Posted by Masimba Musodza at 8:31 pm